အိုဝင်ကတော့ ရှက်ဖီးနဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပြီ… ပေါ့ဂ်ဘာကကော တတိယအကြိမ် ယူနိုက်တက်ကို ဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်အုံးမလား…? – Premier League Special
အိုဝင်ကတော့ ရှက်ဖီးနဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပြီ… ပေါ့ဂ်ဘာကကော တတိယအကြိမ် ယူနိုက်တက်ကို ဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်အုံးမလား…?
January 27, 2021 yeminn Article 0
မနေ့ညက မန်စီးတီးအသင်းကဝက်စ်ဘရောင်းအသင်းကို ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရယူခဲ့တာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကနေ ဒုတိယနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဒီည(၂း၄၅)မှာ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်နဲ့ ကစားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပွဲစဉ်မှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး ( ၃ – ၂ ) ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပရီမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းခဲ့ရာမှာ မှန်ကန်မှုတွေများခဲ့သလို တစ်ချို့ ပွဲတွေမှာဆိုရင် ဂိုးရလဒ်တွေပါအတိအကျခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညပွဲမှာတော့ မိုက်ကယ်အိုဝင်က ယူနိုက်တက်က ( ၂ – ၀ ) ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ် ။
အိုဝင်က BetVictor နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ “ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဇယားအောက်ခြေက ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို အိုးထရတ်ဖို့ဒ်မှာ လက်ခံ ကစားရဖို့ ရှိနေတယ်။ ( ၂ ) သင်းစလုံးက ကြားရက်တွေမှာ အက်ဖ်အေဖလား နောက်တစ်ဆင့် တက်‌ရောက်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ကြတယ် ။
ယူနိုက်တက်က လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ သူတို့အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ အဝေးကွင်း ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်။အခုဆိုရင် သူတို့ဟာ အိမ်ကွင်းရလဒ်တွေပါကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့က လီဗာပူးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်ခြေစွမ်းကို ပြသလာနေပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ အက်ဒီဆင် ကာဗာနီ ပါဝင်လာတာက အသင်းရဲ့ ရှေ့နောက်ချိတ်ဆက်မှုမှာ အဓိကကျသလို သူ့ရဲ့ နေရာယူပုံတွေ နှင့် ပင်နယ်တီ ဧရိယာထိပ်မှာ ဖရီးကစ်ကန်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာတွေက အိုလေရဲ့ အသင်းအတွက် များစွာ အကျိုးရှိပါတယ်။
တစ်ဘက်မှာလည်း ဇယားအောက်ခြေက ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး ၅ပွဲမှာ (၃)ပွဲအနိုင်ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး ပုံစံကောင်းတွေ ပြန်လည်ရယူခဲ့တာကိုတွေ့ရတာကလည်း ဒီပွဲဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော့်အထင် ဒါက ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ဖြစ်လာဖို့ရှိပေမယ့် အိမ်ရှင်ယူနိုက်တက်အသင်းက ဧည့်သည်အသင်းကို အနိုင်ရယူနိုင်တဲ့ ပမာဏထက်ပိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကို ရောက်အောင် နှစ်ကြိမ်တိုင်စွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာက လည်း ဒီပွဲမှာ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် တွေက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ တတိယအကြိမ် ဇယားထိပ်ကိုဆွဲတင်ပေးနိုင်အုံးမလား၊ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူတွေက ဒီပွဲမှာ ခြေစွမ်းတွေပြသလာမလဲ ဆိုတာကတော့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေမှာ သေချာပါတယ်။
အိုဝင္ကေတာ့ ရွက္ဖီးနဲ႔ပြဲမွာ ယူႏိုက္တက္ႏိုင္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းလိုက္ၿပီ… ေပါ့ဂ္ဘာကေကာ တတိယအၾကိမ္ ယူႏိုက္တက္ကို ဇယားထိပ္မွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္အံုးမလား…?
မေန႕ညက မန္စီးတီးအသင္းကဝက္စ္ဘေရာင္းအသင္းကို ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲရယူခဲ့တာေၾကာင့္ ပရီးမီးယားလိဂ္အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ကေန ဒုတိယေနရာကိုေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ ဒီည(၂း၄၅)မွာ ရွက္ဖီးယူႏိုက္တက္နဲ႔ ကစားရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္က ေနာက္ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးအသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလား ပြဲစဥ္မွာ ေျခစြမ္းျပခဲ့ၿပီး ( ၃ – ၂ ) ရလာဒ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ မိုက္ကယ္အိုဝင္ဟာ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ပရီမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြကို ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွာ မွန္ကန္မႈေတြမ်ားခဲ့သလို တစ္ခ်ိဳ႕ ပြဲေတြမွာဆိုရင္ ဂိုးရလဒ္ေတြပါအတိအက်ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညပြဲမွာေတာ့ မိုက္ကယ္အိုဝင္က ယူႏိုက္တက္က ( ၂ – ၀ ) ရလာဒ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္ ။
အိုဝင္က BetVictor နဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာ “ယူႏိုက္တက္အေနနဲ႔ ဇယားေအာက္ေျခက ရွက္ဖီးယူႏိုက္တက္ကို အိုးထရတ္ဖို႔ဒ္မွာ လက္ခံ ကစားရဖို႔ ရွိေနတယ္။ ( ၂ ) သင္းစလုံးက ၾကားရက္ေတြမွာ အက္ဖ္ေအဖလား ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္‌ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ ။
ယူႏိုက္တက္က လက္ရွိမွာ အေကာင္းဆုံး ေျခစြမ္းပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္ ။ သူတို႔အသင္းဟာ ဒီရာသီမွာ အေဝးကြင္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးသိပါတယ္။အခုဆိုရင္ သူတို႕ဟာ အိမ္ကြင္းရလဒ္ေတြပါေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔က လီဗာပူးအသင္းကို အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာလည္း သူတို႔ရဲ႕ ပုံမွန္ေျခစြမ္းကို ျပသလာေနပါတယ္။
ယူႏိုက္တက္အသင္းမွာ အက္ဒီဆင္ ကာဗာနီ ပါဝင္လာတာက အသင္းရဲ႕ ေရွ႔ေနာက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ အဓိကက်သလို သူ႔ရဲ႕ ေနရာယူပုံေတြ ႏွင့္ ပင္နယ္တီ ဧရိယာထိပ္မွာ ဖရီးကစ္ကန္ခြင့္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တာေတြက အိုေလရဲ႕ အသင္းအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိပါတယ္။
တစ္ဘက္မွာလည္း ဇယားေအာက္ေျခက ရွက္ဖီးယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ျပိဳင္ပြဲစံုေနာက္ဆံုး ၅ပြဲမွာ (၃)ပြဲအႏိုင္ရယူထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပုံစံေကာင္းေတြ ျပန္လည္ရယူခဲ့တာကိုေတြ႕ရတာကလည္း ဒီပြဲဟာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အထင္ ဒါက ပြဲေကာင္းတစ္ပြဲ ျဖစ္လာဖို႔ရွိေပမယ့္ အိမ္ရွင္ယူႏိုက္တက္အသင္းက ဧည့္သည္အသင္းကို အႏိုင္ရယူႏိုင္တဲ့ ပမာဏထက္ပိုတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္ ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ကို ေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္စြမ္းေဆာင္ေပးထားတဲ့ ေပါ့ဂ္ဘာက လည္း ဒီပြဲမွာ သူ႕ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြက ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ၊ တတိယအၾကိမ္ ဇယားထိပ္ကိုဆြဲတင္ေပးႏိုင္အံုးမလား၊ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္သူေတြက ဒီပြဲမွာ ေျခစြမ္းေတြျပသလာမလဲ ဆိုတာကေတာ့ ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
အငှားစာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ခဲ့ပြီးနောက် ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ အီဂါလို